Analysis of 314 case - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: analysis of 314 cases of hepatocirrhosis (Inglés - Birmano)
As of early April 2020, the number of confirmed cases of COVID-19 is approaching one million.
2020 ပြည့်နှစ် ဧပြီလ အစောပိုင်းတွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက်သည် တစ်သန်းနီးပါးဖြစ်လာသည်။
2019 ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူဘေးပြည်နယ် ဝူဟန်မြို့၌ အစုအပြုံလိုက် ကူးစက်သော ရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်း မသိရှိရသေးသည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ ပေါ်ပေါက်နေကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရလဒ်များက EU/EEA နှင့် UK တို့တွင် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်သည် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။
မစင်အညစ်အကြေးမှတစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကြောင့် COVID-19 သံသယလူနာ သို့မဟုတ် အတည်ပြုလူနာများအတွက် မီးဖွားခန်းများကို အသုံးမပြုရန် အကြံပြုထားသည်။
တိကျသော ကူးစက်ခံရမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒတ်ရှ်ဘုတ်တွင် COVID-19 “ကူးစက်ခံရသူများ” အဖြစ် ဖော်ပြပါမည်။
ဆေးရုံဆင်းသွားသော COVID-19 ဖြစ်စဉ်များမှ ပြန်လည်သက်သာလာသူများကြားတွင် ရောဂါကာကွယ်သောပဋိပစ္စည်းပရိုဖိုင်များပါရှိသော နာလန်ထလာသူများ၏သွေးရည်ကြည်စုစည်းခြင်းအတွက် စနစ်တစ်ခုကို အကောင်းအထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ဖြစ်ပွားရာ နေရာများကို မြေပုံထုတ်ရန်နှင့် ကူးစက်မှု ပုံစံကို ခန့်မှန်းရန် လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုပုံစံများအား အသုံးပြု လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး ထိုဆန်းစစ်ချက်ကို Travel Medicine ဂျာနယ်တွင် 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အလယ်ပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။
Doctor Zhang Jixian observedacluster of pneumonia cases of unknown cause on 26 December, upon which her hospital informed Wuhan Jianghan CDC on 27 December.
ဒေါက်တာ Zhang Jixian သည် ဒီဇင်ဘာလ 26 ရက်နေ့တွင် အကြောင်းရင်းမသိရသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ လူနာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ထိုသို့တွေ့ရှိရသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သူမ၏ ဆေးရုံမှ Wuhan Jainghan CDC သို့ ဒီဇင်ဘာ 27 ရက်တွင် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
In the European Union, laboratory confirmed cases of COVID-19 are reported within 24 hours of identification.
ဥရောပသမဂ္ဂတွင်၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် 24 နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲခန်းမှအတည်ပြုသည့် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်များရှိကြောင်း သတင်းပို့ထားပါသည်။
ကြာသပတေးနေ့သို့ ရောက်သောအခါ အေပီသတင်းဌာနက ကမ္ဘာအနှံ့ COVID-19 လူနာ အနည်းဆုံး 126,000 ဦး ရှိခဲ့ပြီး လူပေါင်း 4,600 ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
The first case of SARS can be traced back to late 2002 in Guangdong Province of China.
ပထမဆုံး SARS ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်သည် 2002 နှစ်နှောင်းပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဂွမ်ဒေါင်စီရင်စု၌ဖြစ်သည်ဟု နောက်ကြောင်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
According to Johns Hopkins University, as of Wednesday, there were at least 1,279 confirmed cases of COVID-19 in the United States.
John Hopkins တက္ကသိုလ်၏ အဆိုအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ အနည်းဆုံး 1,279 ဦး ရှိကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Invert the case of selected text
ရွေးချယ်ထားသော စာသားကို စာလုံးအကြီးအသေး နဂိုအတိုင်း ပြန်ပြောင်း
ကြာသပတေးနေ့တွင်၊ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ် စုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တစ်မီလီယံကျော်လွန်သွားခဲ့သည်ဟု Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ဒေတာများမှ ညွှန်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် လူအချင်းချင်း ကူးစက်မှု ဖြစ်ရပ်များကို တူနီးရှား ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းပို့ခဲ့သည်။
COVID-19 ကူးစက်သူအများစုမှာ အသက်ရှူစက် သို့မဟုတ် အလားတူစက်များ လိုအပ်လောက်အောင် ရောဂါမပြင်းထန်၍ ကူးစက်သူအချို့သာ လိုအပ်ပါသည်။
It is also of particularly great interest to see whether SARS-CoV-2 might exhibit seasonality as in the cases of community-acquired HCoVs.
HCoVs လူမှုလှုပ်ရှားမှုမှ ရရှိလာသည့် ကူးစက်မှုများကဲ့သို့ ရာသီဥတုအလိုက် ပေါ်ထွက်လာသည့် SARS-CoV-2 ကို မြင်တွေ့နိုင်မှုရှိ၊ မရှိမှာ အထူးသဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
ce mois ci (Francés>Inglés)united we stand, divided we fall (Inglés>Tagalo)regalame una recarga si puede (Español>Inglés)mfumo wa neva wa pembezoni (Suajili>Inglés)na kupendana (Suajili>Inglés)shindano (Suajili>Inglés)docuit (Latín>Inglés)ng'ambo (Suajili>Inglés)natural science society (Inglés>Tagalo)ondoa shaka (Suajili>Inglés)बीपी पिक्चर , (Inglés>Hindi)sa lahat ng ito (Tagalo>Inglés)driver (Inglés>Italiano)kufikia lengo la sufuri (Suajili>Inglés)resolvería (Español>Inglés)uchoraji (Suajili>Inglés)i'll call u right back (Inglés>Hindi)dux ducis (Latín>Español)shikamoo (Suajili>Árabe)dans tes bras c'est mon destin (Francés>Inglés)we?re sorry, but something went wrong (Inglés>Español)bon anniversaire, nos voeux les plus sinceres (Francés>Inglés)oh, tu peux parler en français si tu veux (Francés>Inglés)trockenaufstellung (Alemán>Inglés)it would be good to read stalingrad (Inglés>Galés)